‘प्रधानमन्त्रीजी तपाईंको राजमा को सुरक्षित छ ?’ « Janata Samachar
‘प्रधानमन्त्रीजी तपाईंको राजमा को सुरक्षित छ ?’
प्रकाशित मिति : 19 September, 2019 4:30 pm
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको मर्म र भावना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ । सभापति देउवाले बिहीबार संसदको वर्षे अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै सरकार व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो खेलौना बनाउने प्रयत्न गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो । ।
‘संविधानले कल्पना गरेका संरचना तयार गर्ने काम भयो । तर पछिल्लो समयमा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप कार्यान्वयन र आवश्यक काम हुन सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार एकपछि अर्को संविधान विपरीत कार्य गर्न उद्यत भएको छ । सरकार न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने र व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो खेलौना बनाउने प्रयत्नमा छ ।’
संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा समस्त सहिद र स्वर्गीय अग्रज नेताहरू प्रति म सर्वप्रथम हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु । लोकतन्त्र स्थापना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका निभाउनु भएका स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइमा यो घडीमा हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछु ।
नेपालको संविधान निर्माण भई प्रचलनमा आएको चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधान दिवसको पूर्व संन्ध्यामा म सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाईमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
संविधान निर्माणको घडीदेखि संविधानको प्रचलन र अहिलेसम्मको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । नेपाली जनताले ऐतिहासिक क्रान्ति, लामो राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानवाट मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन गरी नयाँ संविधान प्राप्त गरेका हुन् । यो संविधान राम्रो छ । यो संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यतासहितको संसदीय व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य स्थापना गर्ने काम गरेको छ ।संविधान निर्माणको यो प्रक्रियामा देशको सबै भन्दा लामो इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको
नेतृत्वदायी भूमिका रहेको विषयलाई स्मरण गर्दा मलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ । आज संसदको चालु चौथो अधिवेशनको अन्त्य पनि हुदैछ संसदको यो अधिवेसनले जनताको हितमा के कस्ता काम गर्यो के कति विधेयक र अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावमा छलफल र निर्णय गर्यो त्यसको विवेचना हुने नै छ ।
संविधान प्रचलनमा आइसकेपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ संविधान कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको थियो । यस संविधानले कल्पना गरेका संरचना तयार गर्ने काम भयो । तर पछिल्लो समयमा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप कार्यान्वयन र आवश्यक काम हुन सकेका छैनन । पछिल्लो निर्वाचन मार्फत वर्तमान सरकारले दुई तिहाई मतका साथ यो संविधानको संरक्षण, कार्यान्वयन र नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तमहित गर्ने जिम्मा पाएको थियो ।
वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दासम्म संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्ने, संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित गर्ने, संविधानको मर्म र भावना अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने र संघीयताको बांँकी कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा सर्वदा असफल हुनु अत्यन्तै दुःखद छ । त्यती मात्र होइन सरकार एकपछि अर्को संविधान विपरीत कार्य गर्न उद्यत भएको छ । संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाबीच शक्ति पृथीकीकरण र संन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ तर सरकार न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने र व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो खेलौना बनाउने प्रयत्नमा छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुनु पर्नेछ तर सरकार
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्तो निश्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नु पर्ने निकायमाथि सरकारी नियन्त्रण गर्दैछ । सरकारको काम कारबाहीलाई निगरानी गर्नु पर्ने र स्वतन्त्र रहनु पर्ने आयोगलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने काम भएका छन । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँड गर्ने र संघीयताका आधारमा राज्यव्यवस्था संचालन गर्ने कुरा गरेको छ सरकार अधिकारको केन्द्रिकरण गरी व्यक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउने काममा लागेको छ ।
संविधानले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, विकास निर्माण गरी नेपाललाई संमृद्ध बनाउने कल्पना गरेको छ तर ठूला आयोजनाहरुको आवश्यक पूर्वाधार हनु सकेका छैनन । सरकार विकास निर्माणमा सुस्त, भ्रष्टाचारमा चुस्त देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीजीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिनुभएको ​थियो । तर नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको घटना उहाँको नेतृत्वको यो डेढ वर्षमा भएको देखिन्छ। वाइड बडी, न्यारो बडी जहाज प्रकरण, सुन प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण यसका उदाहरण मात्र हुन सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको भ्रष्टिकरण गर्ने काम भएका छन ।
मैले यस पूर्व पनि भ्रष्टाचार बारे यसै रोष्टमबाट कुरा उठाएको छु । आज पुनः म अपील गर्न चाहन्छु भ्रष्टाचारका कुनै पनि मुद्दामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिइनु हुन्न । छानविनमा आवश्यक साथ दिन प्रतिपक्षको सहयोग रहनेछ ।
संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको छ जनताको सुसुचित हुने अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ तर सरकार संचार जगतलाई नियन्त्रण गर्ने र जनताको सुचनाको मौलिक हकमा बन्देज लगाउन चाहन्छ । सरकारी संचार माध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई राजनैतिक आस्थाको आधारमा सेवाबाट हटाउने, विभिन्न किसिमले संचार जगतलाइ त्रसित गर्ने आतंकित गर्ने काम भएका छन । वैदेशिक नीतिमा सरकार असंन्तुलित र गैर जिम्मेवार बनेको छ । देशको सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा संविधान विपरीत कानुन बनाउन चाहन्छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, संघीयतालाई सुदृढ गर्ने कानुन बन्न सकेका छैनन । बरु संसदमा एक पछि अर्को संविधान विपरीत र विवादास्पद विधेयक ल्याउने, प्रतिपक्षका भनाई नसुन्ने र बलजफ्ती विधेयक पास गर्ने कानुन बनाउने काम भएका छन् ।
देशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति अत्यन्त नाजुक हुदै गएको छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउने र निर्मलालाई न्याय दिने काम गर्नै चाहेन । महिला हिंसालाई समग्रमा निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति हुन सकेको छैन । बलात्कारका अनेकौं घटनाको समाचार देशभरीबाट आइरहेका छन् । पछिल्लोसमय फेरि वीरगंजमा एसिड आक्रमणको घटना भएको छ । सरकार नियन्त्रण गर्ने संस्था भन्दा तथ्यांक संकलन गरेर बस्ने निकाय जस्तो बन्न पुगेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको ‘हिपतम’ राष्ट्रिय जागरण अभियानका क्रममा बांके जिल्लाको खजुरामा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति श्रीमती किरण कोइरालामाथि नेकपाका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेर हात भाँचिएको एकसाता पुगेको छ
। प्रतिपक्षी दलको जिल्ला सभापति त्यो पनि सत्तरी वर्ष पुग्न लागेकी एक महिला नेतृको सम्म सम्मान र सुरक्षा हुन सक्दैन भने म सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजी तपाईंको राजमा को सुरक्षित छ ?
सरकारले प्रहरी प्रशासनले स्वयं अपराधीलाई कारबाही गर्नु पर्नेमा घटनाबारे प्रतिपक्षले रोष्टम घेर्नु पर्ने अवस्था
आउनु अर्को दुर्भाग्य हो । त्यति मात्र होईन नेपालगन्जमा नेकपा कार्यकर्ताको आक्रमणको घटनाको विरोध गर्ने कांग्रेस र पार्टीको भ्रातृ संघका कार्यकर्तामाथि सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्तावाट सांघातिक आक्रमण भएको छ । घाइते भएका साथीहरुको अस्पतालमा उपचार भइ रहेको छ। यस्ता घटनाले सरकार जनताको जिउधनको सुरक्षा होइन आफै राज्य आतंक गर्न लागेको देखिन्छ । देशको प्रशासनिक, प्रहरी सबै सेवामा रहेका पदाधिकारी जनताको करवाट तलव र सुविधा लिई रहेका हुन र जनताका सेवकका रुपमा कानुन बमोजिम काम गर्नु पर्ने हो तर सरकारले प्रहरी प्रशासनमा त्रास र आतंकको अवस्था सृजना गरि कर्मचारीलाई पार्टी कार्यकर्ताको रुपमा काम गराउन चाहन्छ । सरकारी सेवाका मानिस कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बन्ने र बनाउने दुवै कार्य अक्षम्य अपराध हो म स्पष्टताका साथभन्न चाहन्छु त्यो कुनै पनि
हालतमा स्वीकार्य हुने छैन ।
वर्तमान सरकार बनेपछि अकाशिएको बजार मुल्य चाडपर्व नजिकिएपछि झनै बढेको छ । जनता राहत होइन आहत भएका छन । संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्ममा चौतर्फी कर वृदि गरी जनतालाइ थप मार्कामा पारिएको छ। उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी करको चर्को मारका कारण व्यवसायनै गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै गएको छ । देशमा उद्योग संचालनको वातावरण छैन । विदेशी लगानीको अनकुल अवस्था पनि छैन । आर्थीक समृदि नारा कोरा नारा मात्र भएको छ । बेरोजगारी भयावह ढंगले वृदि भएको छ । जनताका आधारभुत आवश्यकताबारेमा समेत सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । म प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु अहिलेको बजार भाउबारे यहाँलाई कुनै जानकारी छ ? म आग्रह गर्न चाहन्छु गरिब जनतालाई बढी प्रताडित नगरौ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको दुई वर्ष समेत नपुगी नागरिक पंक्तिमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ । सपनाको वितरण अन्धाधुन्ध गर्ने तर त्यसलाई पूरा गर्ने दिशामा विश्वसनीय ढंगले कार्य गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले असन्तुष्टि बढाउनु स्वभाविक हो । लोकतन्त्रमा कसैको पनि विजय निश्चित समयावधिका लागि हुन्छ । त्यो बिर्सिएर दम्भको मनोविज्ञान राख्नु, जवाफदेहितामा कमी हुनु र अरूचिकर अभिव्यक्ति सम्प्रेषण गर्नुपनि असन्तुष्टि बढाउने कारण हुन् ।
सरकारप्रतिको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णालाई ब्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णाका रूपमा अतिरन्जित ढंगले कसैले पनि व्याख्या गर्नु हुन् ।
म यो सम्मानित सदनमार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । आफ्ना काम कारबाहीमा सुधार गर्नोस् ब्यवस्थाको सुदृढीकरणमा समस्त जनताको साथ रहनेछ ।
जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुमा सरकारले अघि बढाउन खोजेका अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक विधेयकको पनि भुमिका छ । एकातर्फ सरोकारवालासँग कुनै छलफल र विमर्श नगर्ने अर्कोतर्फ तिनको अधिकारलाई संकुचित र नियन्त्रित गर्ने ढंगले विधेयक प्रस्तुत गर्ने । यस्तो कर्मले सम्बन्धित सबैलाई आक्रोशित बनाउनु स्वाभाविक हो ।
देश र जनताका हित र संविधानको भावनाका विपरीत बहुमतको दम्भमा गरिने सबै गलत क्रियाकलापको विरुद्ध सबैको साथ लिएर नेपाली कांग्रेस संसद र सडक दुवै थलोमा उभिने चेतावनी पनि म दिन चाहन्छु ।
केही समय पहिले तराइ लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा बाढीका कारण जनजिवन प्रभावित हुन गयो । धेरै मानिसहरु घरवार विहीन भए विस्थापित भए म स्वयं बाढी प्रभावीत क्षेत्रमा पुगेको छु । नेपाली कांग्रस पार्टीका सवै साथीहरुलाइ जनतालाइ सहयोग गर्न आवहान गर्यो । हामीले बाढी पीडीतका दैनिय अवस्थाबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने र बाढी पीडितलाइ राहत र पुनस्थापना लगायत कार्य गर्न सरकारसँग माग गर्यौ । तर अहिलेसम्म पनि सरकारले प्राकृतिक प्रकोपका पीडितलाइ राहत हुने कुनै पनि कार्य गर्न सकेको छैन ।
संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दै म नजिकिएका दशै, तिहार, छठपर्व लगायतका सम्पूर्ण चाँडले समस्त नेपालीमा सद्भाव र प्रेम अभिवृद्धि गर्न सकोस्, हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु !
काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले दुई प्रकारका औषधि बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । विभागले न्यून